राजधानी मोदीमय, बस्ती नदीमय
सुनकोशी नदीको प्राकृतिक वहाव रोकिँदा मुलुक अहिले राष्ट्रियविपतामा परेको छ, त्यसको असर सिन्धुपाल्चोक मात्रै हैन् रामेछाप, सिन्धुली सुन्सरीबाट राष्ट्रिय सीमा छिचोल्दै विहारलाई पनि असर पार्ने छ । राजधानी मोदीमय र वस्ती नदीमय भएको छ । तर, यस्तो विपतमा पनि नेपाली शासकहरु भने ‘मोदी उत्सवमा’ मात्र लागेका छन् । रोम जलिरहँदा राजा निरो बासुरी बजाईरहेको प्रशंग फेरी नेपाली शासकवर्गमा लागुहुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यस्तो हुन्छ भने साच्चै महाशक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति वाराक ओवामा नै नेपाल आँउने हो भने यहाँका शासकवर्गले के, कस्तो गर्दा हुँन् ! अर्कोछिमेकी र आर्थिक महाशक्ति चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आँउदा यो सत्कारभन्दा कम भयो भने त्यसको सन्देश के जाला भन्न सकिँदैन् । अर्कोतर्फ नेपाली बहसमा नरेन्द्र मोदीको देवत्वकरण र भगवान जो चित्रण, विश्लेषण गरिदैछ त्यसलाई देखेर भारतीय वौद्धिक समुदाय पनि लज्जित भईरहेको छ । आची गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज । सिन्धुपाल्चोक बहसहीन, संवेदनाहीन, सरोकारहीन बनेको छ । नेपाली मिडियालाई मोदी विक्रीको हट केक बनेकोले नेपाली समाजको बौद्धिकदासता, स्तर र संवेदनालाई छताछुल्ल पारिरहेको पनि छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीको अर्थमा यो भ्रमणमा राजकीय, औपचारिक, धार्मिक जे, जे नाम दिईए पनि उनलाई कुनै फरक पर्दैन । भ्रमणको अन्तरनिहित पक्ष भनेको हिन्दुधार्मिक सास्कृतिक राष्ट्रवादबाट भावना र जीवनदर्शन बनाएका मोदीलाई आरध्यदेव पशुपतीको पुजा अर्चना गुर्नु नै प्रमुख पक्ष हो । तर, ‘भगवान भने अहिले तेती खुशी छैनन्’ । पवित्र हिमालबाट बग्ने सुनकोशीले पाश्पत्यलिला अर्थात ताण्डवनृत्य मच्चाईरहेको छ । प्राकृतिक विपताले भ्रमणलाई आध्यात्मिक ‘चुनौती’ दियो । उनलाई गतवर्ष भएको उत्तराखण्डको प्राकृतिक आपदा स्मरण गरायो होला भने उच्चवाँध र इण्डो टिवेटियन प्लेटको टकराहटको कमजोर भूस्थितीले ल्याउनसक्ने संकट केदारनाथ क्षेत्र जस्तै सुनकोशीको सन्देश बन्न पुग्यो होला । यसले साच्चै मानवियता प्रकट गर्न नेपाली र भारतीय शासक वर्गलाई कटघरामा उभ्यायो पनि ।
जतिसुकै अपेक्षा गरे पनि यहाँका धार्मिक सुद्धतावादीहरुलाई मोदीले पत्याएनन् । के पशुपतीका पण्डाले गराउने पुजा अर्चना साच्चै शुद्धता छैन् ! देवताको दरवारमा पुजा र पुजारी पनि सामान्य र विशेष भिन्न खाले हुन्छन् ! भन्ने समान धार्मिक आस्थालाई समेत विश्वासको संकटमा पुर्‍यायो । त्यसता विशेष खालका व्यबहारलले स्वर्ग र नर्कमा पनि औकात अनुसारको सेवा, सुविधा हुन्छ भनेर आध्यात्मिक आस्थालाई पनि श्रेणीगत तहमा पुर्‍यायो । भारतवाटै पुजारी ल्याउँदा दक्षिण भारतीय पशुपतीका पण्डाको धार्मिक औकात पनि प्रष्टयो । विश्व महाशक्ति दौडमा स्यामाकर्णे घोडा दौडाईरहेका भारतीय शासकवर्गको महत्वकाक्षी प्रतिनिधि मोदीलाई नेपालको विषयमा हस्तक्षेप गरेर फेरी भारतको अन्तराष्ट्रिय छवि गिराउनु छैन् भन्नेकुरा धार्मिक अतिवादीहरुले बुझ्दैनन् । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र एवं कट्टर हिन्दुवादीहरुसंग नभेटेर पात्र फेरिँदा प्रबृति फेरिदैन भन्ने भारतीय शासनसयन्त्रको सन्देश पनि दिए । आफैँ आन्तरिक पृथकतावादी समस्या र पीडामा रहेको भारतले नेपालको मधेश र श्रीलंकाको तामिललाई हेर्ने दृष्टिकोण मधेशी नेतृत्वले नबुझनु र उनीहरुलाई भारतले नपत्याउनु पनि अर्को उदेग लाग्दो विषय हो ।
भारतीय राष्ट्रिय चासोमा खुला सीमाका कारण भारतीय भूभागमा प्रवशगर्ने ‘आतंकवादी’ र नेपालीमार्ग हुँदै नक्कली भारतिय मुद्राले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई पारेको नकरात्मक प्रभाव त छ नै दक्षिणतर्फ शंख्यात्मक रुपमा खुलेको मदरसा पनि मात्र इस्लामिक शैक्षिक कारणले हुँन भन्न सकिँदैन । तिब्र भारतीय आर्थिक विकासदरलाई उर्जाको आवस्यकता त्यति नै खटकेको छ भने नेपाली पाहाडीक्षेत्रमा जम्मा गरेको हिँउदे पानीले उर्जा, सिचाई, वाढी नियन्त्रण उस्को जल–रणनीतिको अर्को हिस्सा हो । अमेरिकालाई जसरी मध्यपूर्व तेलकोलागी आकर्षण छ भारतकोलागी नेपाली जलस्रोतले त्यही अर्थ त्यही राख्छ । उसको सताब्दी जलनीति लक्षमा सेन्ट्रल ग्रिड अर्थात केन्द्रिकृत भारतभरीको जलआपुर्ती नीति छ । सिँचाईको अभावले वर्षमा लाखौं किसानको आत्महत्यालाई रोक्न र अन्तरराज्य जलसंर्घर्षलाई मैत्री बनाउन पनि नेपाली जलस्रोत भारतिय नीति निर्माताको ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
नेपालले माओवादी द्धन्दमा दशक वितायो भने अहिले पनि शान्ति युद्ध चल्दैछ । जनयुद्ध उठान समयका विषय तपशीलमा मात्र परेनन् आन्दोलननै विघटनको दिशामा तिब्र तरिकाले बढेको छ । भलै माओवादी आन्दोलनलाई तोडफोड् भए त्यसमा कति आन्तरिक कारण छन् कति स्वत्वका टकराहटमा अन्य शक्तिको खेल छ त्यो अर्को अद्ययनको पाटो हो । भारतको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीमा त्यहाँ बढदो माओवादी (नक्सलाईट) विद्रोह नै हो भनेर मनमोहन सिह सरकार र मोदी सरकार दुवैको ठम्याई हो । छत्तिसगढ्, ओडिसा, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम वंगाल, मध्य प्रदेश, यूपी, आन्ध्र प्रदेश र तेलंगनाका १ सय ८२ जिल्ला अहिले माओवादी अति प्रभावित क्षेत्र हुन् । स्मरण रहोस् नेपाली माओवादी आन्दोलनको सुरुताका पिपुल्स वारको सामान्य सहयोग, प्रशिक्षण भएता पनि अहिले नेपाली माओवादीको भारतीय माओवादी विद्रोहीसंग कुनै संगठात्मक सम्बन्ध रहेको भने छैन । तर, भारतको आशंका कतै नेपाली माओवादीसंग भारतीय नक्सलाइटसंग सम्बन्ध त छैन् भन्ने पनि हो । भारतीय जन कवि बरबर रावलाई नेपाल भ्रमणको अनुमति नदिनु पनि त्यसैको एक कारण हो । त्यसले हुँनुपर्छ एमाओवादी नेता प्रचण्डलाई भेट्दा मोदीले ड्यास माओवादीसंग भने भेटन चाहेनन् । ड्यास माओवादी उपाद्यक्ष सीपी गजुरेलले भेट्न चाहेको सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।
यस भ्रमणको एउटा उल्लेखनीय पाटो भने नेपाली वौद्धिकहिनताबोध मिडियामा छताछुल्ल भयो । छिमेकी मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधी १७ वर्ष पछि आउनु स्वागत योग्य कुरा हो भने एकअर्काका हितको खुलेर कुरा गर्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यको सकरात्मक अवस्था स्रिजना गर्न अर्थात ट्रयाक टु अभियान चलाउनुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिदैन् तर जुन स्तरबाट स्वर्गै नेपालमा झर्छ र मोदीले नेपालीहितलाई सवै कुरा विर्सेर सहयोग गर्छन् भन्ने जनमत तयार गर्न खोजियो र सुनकोशी प्राकृतिक विपतालाई चर्चाहीन गराउने र सरकारी उदासिनताको समर्थन गर्ने वोद्धिक कसरत भए त्यो भने वौद्धिकदासताको नग्ननृत्य नै भयो । हाम्रा समस्या र भारतिय कर्मचारीतन्त्रले सम्हालेको नेपालनीति र राष्ट्रिय सरोकारले ट्रयाक टु परिवेश बनाउन भने सकेन् । यसले हाम्रा थातीँ रहेका समस्याहरुले भने वाणी पाँउने छनक देखिँदैन् ।